ShweMinThar: October 2009
Posted by Alex Aung at 9:26 PM No comments:
'ဟော..ကိုဝင်းပါလား။ ထိုင်ဗျာ၊ ခင်ဗျားနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကားမပြောရတာတောင် အတော်ကြာပြီ'
'အေးဗျာ...ဒီနေ့အလုပ်အားရက်လည်းဖြစ်၊ ခင်ဗျားဆီမရောက်တာလည်းကြာပြီမို့ မြို့ထဲဝင်လာရင်းဝင်ခဲ့တာပဲ ကိုလင်းရေ'
'ဒါနဲ့ ခရီးရောက်မဆိုက် ခင်ဗျားကို မကျေနပ်တာ ပြောရဦးမယ်'
'ဘာဟုတ်ရမလဲဗျာ၊ ဟိုးတစ်ပတ်က ကျွန်တော့်အိမ်ကို ဘုရားဖူးကြွလှည့်ပါလို့ ခင်ဗျားဆီဖုန်းနှစ်ခါတောင်ဆက်ပြီး သေသေချာချာ ဖိတ်ပါ ရက်နဲ့ ဘာလို့မလာတာလဲဗျ'
'အံမယ်.....ဒီလိုတော့ လွယ်လွယ်မဖြီးနဲ့လေဗျာ၊ ခင်ဗျားကို အလုပ်အားရက်လာခိုင်းတာပဲ၊ အခုဟာက ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဆုတောင်းပြည့် မုနိရုပ်ပွားတော်ကို ဖူးစေချင်လွန်းလို့ တကူးတကဖိတ်တာတောင် မလာတာက ဘာသဘောလဲဗျ'
'အင်း...ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လာစရာ မလိုဘူးထင်လို့ပဲဗျာ'
'ဘယ်လိုဗျ...၊ ဘုရားဖူးလာစရာမလိုလို့ ဟုတ်လား၊ ခင်ဗျား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှဟုတ်သေးရဲ့လား'
'ဒါကတော့ ခင်ဗျားက ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တာနဲ့ ဆင်းတုရုပ်တုတွေ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တာကို ခွဲခြားနားမလည်လို့ ပြောတာပဲဗျ'
'ကျုပ်တို့က ရုပ်တုဆင်းတုတွေကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တာမှမဟုတ်ဘဲ၊ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကို ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရား သက်တော် ထင်ရှားရှိဘိအလား စိတ်အာရုံဝင်စားပြီး ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြတာပဲဗျ'
'ဒါဆိုရင် ကိုလင်းအိမ်က ဘုရားစင်မှာ ရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူရှိပြီးသားပဲဗျာ၊ အဲဒီ...မုနိရုပ်ပွားတော်ကို ထပ်ပြီးပင့်ဆောင် ပူဇော်နေစရာ လိုသေးသလားဗျ'
'ဟာ ဒါကတော့ ဘယ်တူပါ့မလဲ ကိုဝင်းရဲ့၊ အဲဒီ...မုနိဆိုတာက ဆရာတော်၊ သမားတော်ကြီးများက ၀ိဇ္ဇာနည်းကျ ဓာတ်ပေါင်းစုံရောစပ်ပြီး ဖိုဝင် သိဒ္ဓိတင်၊ စမ ခံထားတဲ့ ရုပ်ပွားတော်ဗျ၊ သူ့ကိုပင့်ဆောင်ပူဇော်ရင် စီးပွားတိုးတယ်၊ ရာထူးဂုဏ်သိန်တက်တယ်၊ အနာရောဂါကင်း တယ်တဲ့ဗျ၊ တလောကဆို သူဌေးတစ်ယောက်က ကြည်ညိုလွန်းလို့ဆိုပြီး စိန်ဘယက်ကြီးတောင် ဆက်ကပ်ဆင်ယင်ပေးသွားသေးတယ်၊ လှူလိုက်ကြတာများဗျာ၊ မကိုဋ်တော်ဆိုလည်း ပတ္တမြားရောင်၊ မြရောင်၊ ရွှေရောင် တဖိတ်ဖိတ်နဲ့ အလွန်ကြည်ညိုစရာ ကောင်းပါတယ်၊ ခင်ဗျားသာ မာရ်နတ်မှောင့်ပြီး လာမဖူးတာ ကိုဝင်းရ'
'ဟား..ဟား၊ အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ ကိုလင်းရ၊ ကိုယ့်အိမ်က ရုပ်ပွားတော်ကိုကိုယ် ပန်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီမီးကပ်လှူပြီး သက်ရှိထင်ရှား မြတ်ဘုရားကို အာရုံပြုပူဇော်ရင်လည်း ရရဲ့သားနဲ့၊ ဒီ...မုနိရုပ်ပွားတော်ကိုမှ အထွတ်အမြတ်ထား ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြတယ်ဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့က ဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရားကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တာမှမဟုတ်တော့ဘဲ၊ ဒီ..မုနိလို့ အမည်သညာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းတစ်ခုကို မိမိရဲ့ အားထားရာအဖြစ် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နေကြတာပဲ မဟုတ်လားဗျ'
'ဒါကတော့ ကိုဝင်းက ရုပ်ဝါဒီဆန်ဆန်တွေးပြီး ပြောတာပဲ'
'ကိုလင်းကလည်း မဟုတ်တာပြောရော့မယ်၊ တကယ်တမ်း ရုပ်ဝါဒီဖြစ်နေတာက ခင်ဗျားတို့ပဲဗျ'
'ဟား.....၊ ဒီလောက် ဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေတဲ့ လူတွေကိုများ ရုပ်ဝါဒီလို့ပြောရင် ခင်ဗျားကိုလူတွေက အရူးလို့ပြောကြမှာပေါ့'
'ကျွန်တော်ပြောတာ နားထောင်ပါဦးလေ၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါကတော့ သူ့ကိုကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မယ်ဆိုရင် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပူဇော်သူတွေကို စီးပွားတိုးအောင်၊ ရာထူးဂုဏ်သိန်တက်အောင်၊ အနာရောဂါကင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ ဟောကြားခဲ့ဘူးသလား'
'ဟုတ်ပြီ၊ ဗုဒ္ဓက သူ့ကိုကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပူဇော်ရာ ဘုရားရှင်အဖြစ်လက်ခံတယ်ဆိုရင် သူဟောကြားခဲ့တဲ့ ဓမ္မလမ်းစဉ်အတိုင်း လျှောက် လှမ်းကြဖို့ကိုသာ လမ်းညွှန်ခဲ့တာဗျ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပွင့်တော်မူလာရတာကလည်း လူတွေစီးပွားတိုးဖို့၊ ရာထူးဂုဏ်သိန်တက်ဖို့၊ အနာရောဂါ ကင်းဖို့စတဲ့ လောကီရေးရာလိုအင်တွေကို ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာရာကျင့်စဉ်နည်းလမ်းမှန်တွေကို ညွှန်ကြားသွန်သင်ဖို့၊ တစ်နည်းပြောရရင် လောကီအကျိုးစီးပွားတွေထက် အဆပေါင်းများစွာ သာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ လောကုတ္တရာ အကျိုးစီးပွားအတွက် ပွင့်တော်မူခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဗျ'
'ဒါဆို လောကီအကျိုးစီးပွားတွေ တိုးတက်ဖို့ကျတော့ ဘယ်သူ့သွားအားကိုးရမှာလဲဗျ'
'လွယ်ပါတယ် ကိုလင်းရာ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပေါ့ဗျာ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးကြိုးစားရင် လောကရဲ့အမြင့်ဆုံး အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုတောင် ရနိုင်သေးတာပဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ကံ၊ဥာဏ်၊ ၀ီရိယအစွမ်းကိုလိုက်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးခံစားကြရတာဟာ လောကရဲ့ ဓမ္မတာသဘာဝရဲ့ နိယာမပဲ ကိုလင်းရ'
'ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်မကြိုးစားဘဲနဲ့တော့ အခုအခါခေတ်စားနေတဲ့ ဘာမုနိ၊ ညာမုနိ၊ တိဗက်ပြန်၊ ရခိုင်ပြန်၊ ယိုးဒယားပြန်၊ ဘာပြန်၊ ညာပြန် စမ ခံတဲ့ ၀ိဇ္ဇာဓိုရ်၊ သိဒ္ဓိတင် ဓာတ်ဆင်းတုတော်ဆိုတာတွေက လာပြီးစောင်မပေးနိုင် မှာမဟုတ်ဘူးဗျ၊ ဗုဒ္ဓသက်တော် ထင်ရှားရှိစဉ်အခါကတောင် သတ္တ၀ါတွေရဲ့ ကံ၊ဥာဏ်၊၀ီရိယအလိုက် ခံစား၊ စံစား နေကြရတဲ့ လောကီအမှုကိစ္စတွေကို ၀င်ရောက်စွက် ဖက်မှု မပြုခဲ့တဲ့ဟာကို ဒီသက်မဲ့ ရုပ်ပွားတော်တွေကျမှ လောကီကိစ္စတွေမှာဝင်ပြီး ကယ်တင်စောင်မနိုင်ပါ့မလားဗျာ'
'အေးဗျာ.....ကိုဝင်းပြောမှပဲ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုမကိုးကွယ်မိဘဲ ရုပ်တု၊ ဆင်းတုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေ ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ရတာကို သဘောပေါက်လာတော့တယ်။'
'အဲဒီလို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုမကိုးကွယ်ဘဲ ရုပ်တုဆင်းတုကိုသာ ကိုးကွယ်နေမိသူတွေကြောင့် တချို့နိုင်ငံခြားသား ဘာသာခြားတွေက မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ရုပ်တုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာပါကွာလို့ ဝေဖန်ပြစ်တင်ကြတာပဲဗျ၊ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက် နှစ်ပေါင်းငါးရာလောက်ကြာမှ အိန္ဒိယမှာ ဂရိကျောက်ဆစ်ပညာ ထွန်းကားလာမှုနဲ့အတူ ဗြာဟ္မဏအယူဝါဒ ရော ယှက်ထားတဲ့ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူတွေဆီက စတင်လာခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းအထောက်အထားတွေမှာ တွေ့ရသဗျ၊ မဟာ ယာနတွေရဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ထုလုပ်ပူဇော်မှုကို ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက အစပိုင်းမှာ လက်မခံခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျတော့ လူများစုရဲ့အလိုကို လိုက်လျောခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုတယ်ဗျ'
'အင်း.....ခေတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒါတွေကို စောစောက မစဉ်းစားခဲ့မိလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်မိပါသေးတော့တယ်ဗျာ'
'ဒါကတော့ သတိမမူဂူမမြင်ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ၊ လူတွေဟာ လောဘစိတ်မွှန်လာပြီဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ ပညာဗဟုသုတနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ လူဖြစ်ပါစေ၊ အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေ လုပ်မိကြတာ ဓမ္မတာပဲဗျ။ မိမိကံ၊ ဥာဏ်၊ ၀ီရိယနဲ့ ထိုက်တန်တာထက်လွန်ကဲပြီး စီးပွား တိုးချင်တယ်၊ ရာထူးတက်ချင်တယ်စတဲ့ လောဘစိတ်တွေက လွှမ်းမိုးသွားတော့ အားကိုးရာရှာရင်းနဲ့ အလိမ်ခံရမှန်းမသိ ခံကြရ တော့တာပဲ ကိုလင်းရေ...'
'ဟုတ်ပါ့ဗျာ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်မကိုးမိဘဲ သက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ကယ်တင်ရှင်၊ ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးပေးနိုင်သူအဖြစ် စွဲလမ်း တာဟာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို တန်ခိုးရှိသူ အစိုးရသူ အတ္တအဖြစ် စွဲလမ်းမှုတစ်မျိုးလို့တောင် ဆိုရမလားပဲဗျနော......'
"ဒါကြောင့်မို့ တကယ်တမ်း ရုပ်ဝါဒီတွေဖြစ်နေတာက ခင်ဗျားတို့ပါလို့ပြောတာပေါ့ ကိုလင်းရ။ အမှန်တော့ ရုပ်ပွားတော်၊ ဆင်းတုတော် တွေကို ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး၊ မုဒြ(လက်အနေအထား)အဖုံဖုံနဲ့ ထုလုပ်ကိုးကွယ်ခြင်းဟာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ပဓာနအလုပ် မဟုတ်ဘူးဗျ။ အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ကဆိုရင် 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အတော်များများဟာ လေးသင်္ချေ နဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကြာအောင် ပါရမီဖြည့်ပြီးမှ ဖြစ်တော်မူလာရတဲ့ဘုရား၊ ပါရမီတော်အဟုန် တစ်ကိုယ်လုံးထုံပြီး အလွန် သပ္ပာယ်တော် မူတဲ့ဘုရား၊ ထိုသပ္ပာယ်သော ရုပ်တော်ဝယ် မေတ္တာတော် ကရုဏာတော် ဥာဏ်တော်ကြီးဖြင့် အလွန်တင့်တယ်သော ဘုရား၊ သတ္တ၀ါ တို့တရားထူးရ အောင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခါနီး စက္ကန့်ပိုင်းအထိမနားမနေ တရားဟောတော်မူ တဲ့ဘုရား၊ ဒီလိုသက် တော်ထင်ရှားဘုရား ကိုမမှန်းနိုင်မမျှော်နိုင်ကြဘဲ ရုပ်ပုံ၊ရုပ်ပွားဆင်းတု စေတီတော်များကိုသာ အများစုကိုးကွယ်ရာ ဘုရားလို့ထင်နေခြင်း ဟာ ဘုရားအစစ်ကို ရုပ်ပုံ၊ရုပ်ပွားတော် စသည်က(မမြင်အောင်) ကွယ်ထားသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ ' လို့သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေး ထေရုပ္ပတ္တိဖြစ်တဲ့ 'တစ်ဘ၀သံသရာ' ကျမ်းမှာ ထည့်သွင်းရေးသားသွားခဲ့တာပဲဗျ"
'အင်း....ဆရာတော်ကြီးကတော့ ကျွန်တော်တို့လို လူမိုက်တွေအတွက် ကြိုတင်မြင်ယောင် ရေးသားထားခဲ့သလားတောင် အောက်မေ့ ရတယ် ကိုဝင်းရေ.......'
'ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ ထုလုပ်ပူဇော်ခြင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်တော့ အသွင်သဏ္ဍာန်(Phenomenon) တစ်ခုလောက် ပဲဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုဖူးမြော်လိုက်ရတာနဲ့ ဗုဒ္ဓသက်တော်ထင်ရှားရှိနေသလို စိတ်အာရုံမှာမြင်ယောင် ကြည်ညို သဒ္ဓါပွားလာပြီး ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဒေသနာအဆုံးအမတွေကို ယုံကြည်လိုက်နာလိုစိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့အမျှ လက်တွေ့ဘ၀မှာ လိုက်နာ ကျင့်သုံးလာစေဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်သည်သာ အနှစ်သာရ (Essence) အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဗျ။ တစ်နည်းပြောရရင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ကို ဓမ္မပူဇာနဲ့ ပူဇော်ကြဖို့ပဲ ကိုလင်းရ'
'ဓမ္မပူဇာရဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေးလည်း လင်းစမ်းပါဦး'
'ဓမ္မပူဇာဆိုတာက ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓမ္မတရားတော်များနဲ့အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဗျ။ အဲ...ဗုဒ္ဓကို ဆွမ်း၊ ပန်း၊ ရေချမ်း၊ သင်္ကန်းစတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထု ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းကိုတော့ အာမိသပူဇာလို့ခေါ်သဗျ။ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကတော့ ငါဘုရားအား ဓမ္မပူဇာဖြင့် ပူဇော်ခြင်းသည်သာ မြတ်သောပူဇော်ခြင်းမည်၏လို့ ဟောကြားခဲ့ပါတယ်'
'ကိုဝင်းပြောမှ ကျွန်တော်တို့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ ရုပ်ပွားတော်များထုလုပ်ပူဇော်ခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဘာသာ ခြားတွေနားလည်အောင် ရှင်းပြနိုင်တဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဥပမာတစ်ခုကို သွားသတိရမိတယ်ဗျ'
'ဒီလိုလေဗျာ၊ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အစဉ်သတိရပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် မျိုးချစ်စိတ်ကို အားကျဂုဏ်ယူအတုယူချင်လာအောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ လမ်းစဉ်ကို လိုက်နာပါ့မယ်လို့ သံန္နိဌာန်ပြုပြီး လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တွေ ထုလုပ်အလေးပြုကြတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့၊ မဟုတ်ဘူးလား'
'သိပ်ဟုတ်တာပေါ့ ကိုလင်းရာ၊ ဒါနဲ့ခင်ဗျားက ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်အကြောင်းပြောမှ ကျွန်တော်လည်း ကာတွန်းဆရာကြီးတစ်ဦးရေးဆွဲခဲ့တဲ့ အာဇာနည်နေ့ကာတွန်းလေးကို သတိရမိပြန်သဗျ'
"ကာတွန်းလေးက ဒီလိုဗျ၊ အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ် ချီတက်အလေးပြုဖို့လာကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကို ဦးဆောင်တဲ့လူကရှေ့ကနေ 'အာ ဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို အလေး......ပြု'လို့လည်း အမိန့်ပေးလိုက်ရော လူအုပ်ကြီးက တညီတညွတ်တည်း အလေးပြုလိုက်ကြ တယ်ဗျ၊ အဲ....သတ်မှတ်တဲ့ မိနစ်ပိုင်းလည်းစေ့ရော ဦးဆောင်တဲ့လူက 'နေမြဲ'လို့ တစ်ခွန်းတည်း အမိန့်ပေးရမယ့်အစား သူက - 'နေမြဲ၊ စားမြဲ၊ခိုမြဲ၊ ကပ်မြဲ ခါတိုင်းလိုပဲ ဆက်လုပ်ကြ' ဆိုပြီးအမိန့်ပေးသွားပုံကို ရေးဆွဲထားတယ်လေ၊ စာသားအတိအကျတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ၊ အဲဒီသဘောအတိုင်းပေါ့'
'ဟား....ဟား....ဟား ကာတွန်းဆရာကြီးက လူတွေရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လိုသဘောထားပြီး ပေါ့ပေါ့တန်တန် လုပ်တတ်တဲ့ စရိုက်ကို သရော်ထားတာပေါ့နော'
'မှန်တာပေါ့ ကိုလင်းရာ၊ အခုလည်း ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှေ့ကိုသွား၊ ကိုယ်ရတတ်သမျှ ဘုရားရှိခိုး စာတွေတသီကြီး ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကန်တော့လို့လည်းပြီးရော အခုနကလိုပဲ နေမြဲ၊ ခိုးမြဲ၊ လိမ်မြဲ၊ကောက်မြဲ၊ သတ်မြဲ၊ ညစ်ပတ် မြဲဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကို ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ အသွင်သဏ္ဌာန်တစ်ခုသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဒေသနာ တော်တွေကို လက်တွေ့ ဘ၀မှာ လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့ အနှစ်သာရ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာပေါ့ဗျာ။ ကဲ....စကားကောင်းနေလိုက်ကြတာ အချိန်လည်း အတော်လင့်ပြီမို့ ပြန်ခွင့်ပြုပါဦး ကိုလင်းရေ'
'ကောင်းပါပြီဗျာ၊ နောက်တစ်ပတ်ကျ ပြန်ဆုံကြသေးတာပေါ့'
ဓမ္မရံသီ၊ ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ ဧပြီလ။
အချစ်စစ်မှန်ရင် မနာလိုဝန်တိုစိတ်ကတော့ မလွဲမသွေရှိတယ်။ အဲဒီ့မနာလိုဝန်တိုစိတ်ဟာ ၀န်တိုခြင်းငါးမျိုးနဲ့ မသက်ဆိုင် ဘူး၊ အချစ်မှာဝန်တိုတာဟာ သတ်သတ်ဖြစ်တယ်။ အချစ်မှာရှိတဲ့မနာလိုစိတ်လေးဟာ ဟင်းလျာတစ်ခွက်မှာရှိတဲ့ ဆားနဲ့ တူတယ်။ မပါရင် ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နိုင်ပြီး လွန်သွားရင်လည်း ငန်တန်တန်နဲ့ အရသာပျက်သွားတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဆားနဲတဲ့ မနာလိုအချစ်လေးအကြောင်း ပြောရင်း အချစ်ဋီကာ ဖွင့်လိုက်ကြပါစို့။
မနာလိုစိတ်ဟာ သာမန်အားဖြင့် နားလည်ခံစားပေးလို့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုချစ်လို့သာ မနာလိုစိတ် ဟာ ပေါ်ထွက်လာရတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မနာလိုစိတ်ဟာ စိတ်မချမှုထက် မယုံကြည်မှုဘက်ပေါ်မှာ ပေါက်ဖွားလာရင် တော့ မကောင်းတော့ဘူး။ ကိုယ့်ချစ်သူဘက်က ရိုးသားတယ်၊ စိတ်ချယုံကြည်ရတယ်ဆိုရင် မနာလိုစိတ်ကိုလျှော့လိုက်၊ သူ့ကိုယုံကြည်မြဲ ဆက်လက်ယုံကြည်ပေးဖို့လိုတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘဲ သူလုပ်သမျှအလုပ်တိုင်းကိုသိချင်တယ်။ သူဘယ်သူနဲ့ ဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာ အချိန်တိုင်းသိချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါအလုပ်မဟုတ်တော့ဘူး။ သူနဲ့ကိုယ်ကြား ကတောက် ကဆ စကားများဖို့ လမ်းစရလာပြီဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူအနေနဲ့ သူဘယ်သွားတယ်၊၊ ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဆီ အချိန်တိုင်း သံတော်ဦးတင်ဖို့ဆိုတာ မနာလိုမှု လွန်ကဲသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကိုယ်ကနားလည်ပေးရမယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်အပေါ် မရိုးမသားနဲ့ သစ္စာဖောက် နေတယ်လို့ သံသယရှိတာက တစ်ပိုင်း၊ သူဘာလုပ်ချင်နေတယ်ဆိုတာကို သိချင်နေတာက တစ်ပိုင်း၊ အချိန်တိုင်း ဖုန်း ဆက်ခိုင်းဖို့ မနေ့ကာဘာလုပ်ခဲ့တယ် ဘယ်သွားတယ်ဆိုတာ အမြဲသံတော်ဦးတင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာတွေက အချစ်ဘောင် ကျော်သွားတဲ့ အလုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ သာမန်အဆင့်လောက်ပဲဆိုရင်တော့ မနာလိုတာဟာ အချစ်ကို ပိုပြီး အသက်ဝင် လှုပ်ရှားလာစေပါတယ်။
လူတိုင်းဟာ သူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ အလိုဆန္ဒနဲ့ထပ်တူညီလေ့မရှိကြပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာ စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အမှန်တရားနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်နေလျက်ရှိကြတယ်။ သင်နဲ့သင့် ချစ်သူကြား မှာလည်း နှုတ်မှမပြောတဲ့စကားပေါင်းများစွာရှိတယ်။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စကားနဲ့ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့စကား တို့ဟာ အမြဲထပ်တူညီလေ့မရှိဘူး။ မကြိုက်ပေမယ့် ကြိုက်ဟန်ဆောင်ပြီးပြောကြတယ်၊ ချစ်ပေမယ့်မုန်းဟန်ဆောင်တာ မုန်းတီးစကားဆိုကြတယ်။ ဆိုကြပါစို့။ သင့်ချစ်သူက အလုပ်ခွင်ထဲကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့ဘက်ကမိသားစုအကြောင်း ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောမယ်၊ အရေးမကြီးသလိုပြောမယ်၊ ဒါပေမဲ့ တကယ်က သူ့အတွက် အရမ်းကို စိုးရိမ်ပူပန်အရေးတယူပြုရမယ့် အရေး တကြီးကိစ္စဖြစ်တယ်။ သင့်အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့် အရေးတယူလုပ်ပြီးမပြောဘူး။ ဒါပေမဲ့ သင့်ဘက်က အရေးတယူနဲ့ နားထောင်ပေးတာကိုလိုချင်တယ်၊ သူ့အနေနဲ့ အရမ်းကိုအကဲပိုအဖြစ်သည်းလွန်းတယ်လို့ သင်ထင်သွား မှာကို မလိုလားလို့သာ ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်။
ဒါကို သူ့နှုတ်ကမပြောပေမယ့် သူ့အမူအယာတွေက ပြောနေလိမ့်မယ်။ ဒါကိုကိုယ်က မျက်စိရှင်ရှင်နဲ့ ရှာတတ်မြင် တတ်ဖို့ လိုတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ့်ချစ်သူက လိုချင်ရဲ့သားနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် မလိုချင်ဘူးဘို့ ပြောတဲ့ စကားတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ပြောတဲ့စကားနဲ့ပြနေတဲ့အမူအယာတို့ဟာ လိုက်ဖက်ညီမညီကို အကဲဖြတ် တတ်ဖို့ လိုတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းဟာ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့အချစ်ကို ပိုပြီးရရှိလာစေတယ်။ ပိုပြီး ခိုင်မြဲလာစေတယ်။ နက်ရှိုင်း လာစေတယ်။
အချစ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားပြောပေးဖို့ အင်မတန်လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားမပြောကြဘူးဆိုရင် တစ်ယောက်ဘာလိုတယ်၊ ဘာစဉ်းစားနေတယ်၊ ဘာကိုခံစားနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သိနိုင်တော့မလည်း။ သူ့အတွေး၊ သူ့ခံစားချက်တွေကို သိနိုင်ဖို့ စကားပြောပေးရမယ်။
စကားနည်းတဲ့ အကျင့်ရှိရင်တောင် သူဘာလိုသလဲ၊ ဘာစဉ်းစားနေသလဲ ဘာဖြစ်ချင်သလဲဆိုတာလောက်တော့ သိအောင် လုပ်ဖို့ စကားဟပေးရမှာဖြစ်တယ်။ ချစ်သူနှစ်ယောက်အကြား စကားသံတွေ ဆိတ်သုဉ်းသွားပြီဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပိုပြီးဝေးကွာသွားတတ်ကြပါတယ်။ သူစိမ်းဆန်သလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်။ စကားပြောတာဟာ တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက်ကို ပိုပြီးရင်းနှီးလာစေတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကြားမှာရှိတဲ့ အဟန့်အတားတွေကို ဖယ်ရှား ပေးတယ်။ အထူးသဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်၊ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်တွေ၊ ပြဿနာတက်နေတဲ့အချိန်တွေကျရင် ပိုပြီးစကားပြောပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အားအားရှိမဟုတ်တမ်းတရားတွေ ပြောနေဖို့တော့ မလိုဘူး။ ဘာတွေပြောဖို့လိုအပ်သလဲဆိုတော့ သူနဲ့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာအကြောင်း၊ အနုပညာဖျော်ဖြေ ရေးအကြောင်း၊ စိတ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာအကြောင်း၊ ဗဟုသုတရဖွယ်ရာအကြောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်။
ပြောရုံပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး၊ ကိုယ့်ဘက်က ပြောသင့်တာပြောပေးရမှာဖြစ်သလို သူ့ဘက်ကပြောစကားတွေ ကိုလည်း ဂရုတစိုက်နဲ့ အလေးပေးနားထောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။
ချစ်သူနှစ်ဦးကြား ပြောစရာစကားမရှိတော့ဘူးဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုပြီးအလှမ်းဝေးကွာသွားတတ်ပါတယ်။ ကြာလာရင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တစိမ်းတရံတွေလို ခံစားရပြီး လမ်းခွဲရတတ်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ချစ်ခြင်းမှာ အသံလှိုင်းဆက်သွယ်မှု ပြတ်တောက်မှုမရှိဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားရင်း ချစ်သူတွေအားလုံး အဆင်ပြေစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Ref: 8 Days A week Journal Vol. 1 No. (30) – Oct.9– 16 2009
Posted by Alex Aung at 8:48 PM No comments:
အရေပြားသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အင်္ဂါများသို့ ပိုးမွှားများတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်မှုမရှိစေရန် ကာကွယ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အရေပြားသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပြင်ပမှပိုးမွှားဖြစ်သည့် ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်နှင့် မှိုအစရှိသည်များနှင့် ထိတွေ့နေရသည်။
ထိုအထဲတွင်မှ အရေပြားမှိုစွဲရောဂါသည် အဖြစ်များသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှိုတို့၏ သဘောအရ ပူအိုက်စိုစွတ်သည့် ရာသီဥတုတွင် ပေါက်ပွားလေ့ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြင်ပရာသီဥတုနှင့် လူ၏တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအားနည်းသည့်အခါတွင် အရေပြားမှိုစွဲရောဂါဖြစ်ပွားလာလေ့ရှိသည်။
အရေပြားမှိုစွဲရောဂါသည် အသက်အရွယ်မရွေး၊ ကျား၊မ မရွေး ခန္ဓာကိုယ်၏မည်သည့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွင်မဆို ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး၊ ဖြစ်ပွားသည့်နေရာပေါ်တွင်မူတည်၍ ပုံသဏ္ဍာန်ကွဲပြား နိုင်ကြောင်း အရေပြားအထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးကပြောသည်။
အလားတူ ကိုယ်ခံအားကျဝေဒနာရှင်များ၊ နာတာရှည်အိပ်ရာထဲလဲနေသူများ၊ သွေးချို၊ဆီးချိုရောဂါ သည်များ၊သွေးချို၊ ဆီးချိုရောဂါသည်များ၊ ကင်ဆာရောဂါသည်များသည်လည်း အရေပြားမှိုစွဲရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း သိရသည်။ များသောအားဖြင့် အရေပြားမှိုစွဲရောဂါသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူခိုဝင်ချွေးစိုနေလေ့ရှိသည့် ခန္ဓာကိုယ်ကြားနေရာ များတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသည်ဟု ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးကပြောသည်။
အရေပြားမှိုစွဲရောဂါသည် ဖြစ်သည့်နေရာဒေသအလိုက် မှိုအမျိုးအစားအလိုက် ကွဲပြားခြားနားပြီး အခေါ်အဝေါ်များလည်း ကွဲပြားသွားကြောင်း သိရသည်။
ဒက်ဟုခေါ်သည့် အရေပြားမှိုစွဲရောဂါတစ်မျိုးသည် လူအများနှင့် ရင်းနှီးပြီးသားရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ များသော အားဖြင့် ကလေးငယ်များတွင် ဖြစ်လေ့ရှိပြီး၊ အထူးသဖြင့် ကိုရင်ငယ်လေးများတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဒက်ရောဂါသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူးစက်မြန်ဆန်သော အရေပြားရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု အားနည်းခြင်း၊ အိပ်ရာခေါင်းအုံးများ မသန့်ရှင်းခြင်း၊ ဦးခေါင်းရိပ်ဓားများ မျှဝေသုံးစွဲခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိတတ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒက်သည် ဦးခေါင်းအရေပြားတွင် ဖြစ်ပွားသော အရေပြားမှိုစွဲရောဂါဖြစ်သဖြင့် ဆံပင်အမြစ်ထဲအထိ လှိုက်စားကူး စက်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။ ဒက်ပေါက်ပါက သာမန်အရေပြားလိမ်းဆေးများဖြင့် ကုသခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ တက်ကျွမ်း သူနှင့် စနစ်တကျ ကုသသင့်ကြောင်း သိရသည်။
"ဒက်က ဦးခေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အရေပြားမှိုစွဲရောဂါဆိုတော့ ဆံပင်အမြစ်ထဲအထိ လှိုက်စားကူးစက်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အပြင်က အရေပြားဆေးတွေ လိမ်းရင်လည်း မျက်စိအမြင်မှာသာ ပျောက်သွားပေမယ့် တကယ်အမြစ်ပြတ်တာဟုတ် ချင်မှ ဟုတ်မယ်"ဟု ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးက ပြောသည်။
ဒက်ပေါက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအား အထူးဂရုစိုက်ခြင်း၊ခေါင်းအုံးအား သန့်ရှင်းစွာထား၍ ခေါင်းအုံးစွပ်များအား သုံးရက်တွင် တစ်ကြိမ်လဲလှယ်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
ညှင်းသည်လည်း အရေပြားမှိုစွဲရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း သန့်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွား လေ့ရှိပြီး၊ ညှင်းပေါက်ပွားပါက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အဆီအထွက်များသည့် ကျော၊ရင်ဘတ်၊လည်ပင်းနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ မျက်နှာအထိ ပေါက်ပွားလေ့ရှိကြောင်းသိရသည်။ ၄င်းအပြင်သာမန်ထက်လွန်ကဲ များပြားလာပါက ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခု လုံးပေါက်ပွားသွားနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ညှင်းပေါက်ပါက ယားယံခြင်းမရှိသော်လည်း အရေပြားပေါ်တွင် အညို၊အဖြူ၊ သို့မဟုတ် ပန်းရောင် အကွက်များဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြောင်း သိရသည်။ ညှင်း၏သဘောသည် လူမြင်သည့်နေရာများတွင် ပေါက်ပွားလေ့ ရှိသဖြင့် ဖြစ်ပွားပါက အမြန်ဆုံးကုသမှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးက ပြောသည်။
"လူငယ်တွေ ဘောလုံးကန်ပြီးတော့ ချွေးသံတွေနဲ့ အင်္ကျီတွေပြန်ဝတ်ပြီး၊ အအေးဆိုင်ထိုင်၊ အကြော်ဆိုင်ထိုင်နဲ့ဆို တော့ အဲဒီမှာ ညှင်းပေါက်ဖို့အလားအလာပိုများတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ချွေးစိုနေတဲ့ အင်္ကျီတို့၊အတွင်းခံတို့ကို မ၀တ်သင့် ပါဘူး"ဟု ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးကပြောသည်။
ပွေးသည်လည်း ကြည့်ရဆိုးသော အရေပြားမှိုစွဲရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားတွင် ပေါက်ပွားလေ့ရှိပြီး၊ အထူးသဖြင့် ချိုင်း၊ ပေါင်ခြံ၊ တင်ပါးနှင့် ဗိုက်တို့တွင် ပေါက်ပွားလေ့ရှိကြသည်။
ပွေးသည်လည်း တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူးစက်ခြင်းစသည်အကြောင်းများကြောင့် ပေါက်ပွားနိုင်သည်။ ပွေးသည်ပျံ့နှံ့မြန်သော အရေပြားမှိုစွဲရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သဖြင့် တစ်ပတ်၊နှစ်ပတ်အတွင်း၌ပင် ၀မ်းဗိုက်တစ်ပြင်လုံး အထိ ကူးစက်သွားနိုင်သည်ဟု သိရသည်။
အရေပြားမှိုစွဲရောဂါသည် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မည်သည့် နေရာတွင်မဆို ဖြစ်ပွားတတ်သည်ဟု အထက်တွင် ရေးသားဖော်ပြ ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှုစွဲရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည် ပွေးသည်လည်း ခြေသည်း၊ လက်သည်းတို့တွင်ဖြစ်ပွား နိုင်သည်။ ခြေသည်း၊ လက်သည်းများသည် ဖွဲ့စည်းပုံမတူညီသဖြင့် ခဲ၍မာကျောကျောဖြစ်နေသော်လည်း အရေပြား မှိုစွဲဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးကဆိုသည်။
ခြေသည်း၊ လက်သည်းပွေးရောဂါသည် ရေအမြဲကိုင်နေရသူများ၊ အရည်တစ်မျိုးမျိုးနှင့် အစဉ်ထိတွေ့နေရသူများ အဖြစ်များသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ရှင်မများ၊ အလှပြင်ဆိုင်များ၌ခြေသည်း၊ လက်သည်းအလှပြင်ရာ၌ သန့်ရှင်းမှု မရှိသည့် အလှပြင်ပစ္စည်းများနှင့် ပြုလုပ်ခံရသူများဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ခြေသည်း၊လက်သည်း ပွေးရောဂါသည် ခြေသည်း၊လက်သည်းပွခြင်း၊ ခြေသည်း၊လက်သည်း ပန်းကုံးများ ပွခြင်း၊ ပြည်တည်ခြင်း စသည့် လက္ခဏာများဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ထိုရောဂါအားကုသရာတွင် တုံ့ပြန်မှုနည်းသဖြင့် လအနည်း ငယ်မှ လအတော်ကြာအထိ ကုသရကြောင်း သိရသည်။
"အရေပြားရောဂါအများစုက အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်နိုင်မှုနည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူမှုရေးအရကြည့်မယ် ဆိုရင် တော့ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ self confident လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းခြင်းစတဲ့ လူမှုရေးပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်"ဟု ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးက ပြောသည်။
အကယ်၍ မိမိထံ၌လည်း အရေပြားမှိုစွဲရောဂါခံစားရပါက နီးစပ်ရာလိမ်းဆေးများ နှင့်ကိုယ်ပိုက်ကု သခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ၊ တတ်ကျွမ်းနားလည်သူများနှင့် ပြသ၍ အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းသည်အထိကု သသင့်ကြောင်း သိရသည်။
Ref: 7Day News Journal Vol. 8, No. (30) – Oct. 8, 2009
Posted by Alex Aung at 11:51 AM No comments: